Fakkeessuun Amma Yoomiitti Biyya Bulcha? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooFakkeessuun Amma Yoomiitti Biyya Bulcha?
Damee Boruu: Waxabajjii 07, 2020
Warra Motummaa Kononeel Abiyi wajjin dhaabbatuufis tahee mormaa jiruuf Impaayeerri Itoophiyaa daddaffiin akka dhidhima seenaa jirtu baraanii waan dhufuuf of qopheessuun barbaachisaa dha. Mootummaan mucaa guddifane TPLF waanuma abbaa buddeenaa isaa irraa bare utuu olii fi gadi gagalagalchuu biyyi akka bixxilee eelee sibiilaa harkatti gubachaa jira. Dhugaa dhoksuu fi sobaan kakachuun hiikaa hin fidu. Yaroo hundaa isaa of doomsuu fi of gowwomsu malee isaa of qaru argaa hin jirru.
Waan umurii guutuu TPLF jalatti barachaa ture irra silaa xiqqoo baratee jireenya uummataa amma tokko foyyeessuu waan tokko. Namichi abjuun machaa’ee kun Masaraa Miniliki haaromsuu fi bareechuu irra darbee waa’ee uummata biyya sanaa yaaduuf yaroo hin qabu. Gaafa of agarsiissu barbaadu kameeraa of duuba yaase boqoloo keessa, yookan qamadii deemee waan hormaata irratii of bobaase of fakkeessa.Yookaan warshaa keessa utuu figuuu yookan utuu mukka dhaabuu of agrsiisa. Akka yaada isaa ti waan biyyaaf dadhabaa jiru of fakkeessuuf.
Namoonni biyya bulchaan nama isaan gorsuu fi qajeelchuu qabaachuun waan jiru. Prezedaantiin Amerikaa Trump beektota isa gorsan hedduu qaba. Haa tahu malee yaroo tokko tokko gorsa isaanii didee yaada mataa isaa dubbachuun beekama. Kanaa irraa kan ka’e baayyee qeeqamaa jira. Sababni duraa biyyi Ameerikaa biyya lafaa hunda irraa dhukkubni covid-19 midhamaa jirtuuf, rakkina Prezedanti Trump irra kan ka’e yaroon qophaa’uu dhiisuu dha jedhamee fudhatmaa jira.
Kononeel Abiyi warri gorsan dabtaroota Habashaa fi ilmaan nafxanyootaa qofa. Warri kun dharraa fi dheebuu aangoo qabaachuu malee dirqamni biyya bulchuu nageenya uummataa fi biyya tiksuun akka wajjin deemu hin argan. Inni gadi bahee waan barbaade yoo sobee fi waakkate bareedaa miti uummatni si jiba jedhanii dhugaa itti hin himan. Yoo inni sobee qufa’e illee harka rukkutuuf. Sababa kana irraa kan ka’e nagaa fi mirga dhala namaa bara TPLF daran hammatee jira.
Sobuu fi waakkachuun mallatoo mootummaa isaa akka tahe wal nama hin gaaffachiisu miti. Kan walii gala OPDO akka dhoqee bukkeesse tolshee qaama itti baasee asiin gahe TPLF akka tahe OPDOn iyyuu wakkaatee hin beektu. Waggaa 27 TPLF wajjin maqaa ABOn oromoo hunda lafa irraa dugugaa baatee waan waggaa lama keessatti maqaa sadii jijjirateef waan uumatni eenyummaa ishee walaale itti fakkaata. Afaanan qaba jettee ABO fi TPLF waliin jiru jechuun qaanii du’a caalu.Safuun maal akka tahe hin beektu. Baayyeen isaanii hirina sammuu akkaqaban illee naaf gala. Kanaafuu uummata itti gadi bahaan afaan banuu malee akka uummatni isaan taajabaa jiru hin argani.
Mee waanuma salphaa kana qalbiin haa ilaallu. Kaleessa Mumichi Ministeera gaara irratti ol bahee “barana muka billiyoona shan dhaabuuf qophii qabna” jedhee oduu jalqabu. Muka dhaabbuun yaada bareedaa dha. Akka haasa isaa itti dhufaatiin COVID-19 jireenya keenyaa fi hojii keenya irraa nu dhaabu hin qabu jedha. Nu dhaabbus hin danda’u jedha. Yoo akkas tahe muka billiyoona shan ala bahanii baatii afurii amma shaniif dhaabuu immoo guyyaa tokko gadi bahaan quba tokko waraqaa irra ka’an nama bakka bu’aa ofii filachuutu covid-19f nama saaxila. Kana yaroo ilaalu aangoo gadhiisuu diduuf malee covid-19 akka filmaatni hin taane rakkina tahee miti. Sababa hin fakkaanee kanaan filmaata diduun irra akkuma Malasaa sana “aangoo hin gadiisu abbaan dandeessan koota humnaan na irra fudhaa” jechutu salphaa dha.
Biyya Ameerikaa keessatti namoota 1,989,984 dhukkuba covid-19iin qabaman keessaa namni 112,113 amma har’a kanatti du’anii jiru. Haa tahu malee facaasaa darbeeI(Waxabajjii 2, 2020) kana kutaa Ameerikaa baayyee keessa itti namoota baatii Sadaasa dhufuu filmaata biyyaaf dhiyaatan filaataa olan. Kana malee sababa Poolisiin Adiin tokko nama gurraacha Ameerikaa George Fylod jedhamuu seeraa ala ajjeesseef Poolisii ajjechaa kana raawwatee fi Mootummaa irratti aariin gara torbaan tokkoof guyyaa guyyaan hiriirri godhamaa jira. Dhukkubni covid-19 jiraachuu fi nama baayyee ajjeessuun filmaataa fi hiriiraa bahu nama dowwuu hin dandeenye. Gocha poolisii kana balaallefatu biyyoota Awuropaa fi Kanadaa keessatti illee dabree finiinaa jira. Yoo mirgi dhala namaa dhiitamee, seeraa fi heerri kabajamuu dhabe uummatni taa’ee ilaaluun badii mootummaan dalagu fudhachuu wajjin garaagarumaa hin qabu. Uummatni mootummaa dura dhaabbatee aarii himachuuf haala mijjaawwaa eegachuu hin jqabu.
Rorroon Mootummaan Kononeel Abiyi Uummata Oromoo irraan gahaa jiru kan obsa naama kutachiisu akka tahe gaaffii hin qabu. Uummatni Oromoo gamtaan ka’ee mootummaa nama nyaataa kana duraa dhaabbachuu yoo barbaadee mootumichaa irraa eehama hin gaafatu. Waan nageenya isaaf barbaachisaa taheef waan barbaadu adda baasee tilmaamatee ka’uu qaba. Dhiiga ofii akka bishaanii dhangalaasanii aangoo orma biraa badhaasanii galuun waan nu bare tahuu hin qabu. Inni duraa yaroo kana keessa gurmuun bahanii diinni dura dhaabbachuuf afaanii fi funyaan itti uffatanii dhukkuba kana irraa of eeguu fi wal eeguun baayyee akka barbaachisaa tahe dagatamuu hin qabu. Dand’amnaan bishaan harkatti qabachuun aara nama ukkamsuu ija irra dhiquuf nama gargaara.
Diddaan Uummata waan akeekkachuu qabu keessa:
Komandi postiin Oromiyaa keessaa akka buqa’u!!
Rayyaan Ittisa Biyyaa fi humn federaala Oromiyaa keessa akka bahu!!
Oromonni mana hidhaa keessa jiran haala duree tokko malee hatattamaan akka gadifaman!!
Admasamuu, hidhamuu fi ajjeefaun akka dhaabbatu!!
Qabeeny Uummata Oromoo saamuun haa raawwatu, Kan saamamee jiru abbaaf akka dheebi’u lafa dabbalatee!!
Namoota qaamni Hir”ate mootummaan beenyaa haa baasu !!
Waan hundaa caalaa Uummatni Oromoo ofiin of haa bulchu!!
Yaadni kunii fi kan kana fakkaatan ijoo qabsoo uummata keenyaa waan tahu danda’u natti fakkaata.
Karaa biraa hammeenya humna mootummaa irraa dhufuu danda’u hubannee itti deemaa jira. Amma danda’amee haqaa keenyaa karaa seeraa fi heera taheen karaa nagaa gaafachuun dirqama namumaa ti. Garuu mootummaan uummata sodachisuu fi dorsisuuf jecha humna qabuun cabsuuf hin yaalu jennee yaaduu hin dandeenyu.
Mootummicha duwwaa utuu hin taane warra farraa Oromoo tahan ilmaan nafxanyoota biyya Oromoo keessatti ijaaramanii akka jiran dagatamuu hin qabu. Yaroo darbe waan Adaamaatti raawwatame fakkeenyaa fi barnoota nuuf tahuu qaba. Hoteelaa fi mana amantii isaanii keessa meessa lola tulatanii akka qaban mamuu qabna.
Tarkaanfii wal fakkaataa yaroo tokkotti fudhachuun humna diin ni facaasa. Kanaafuu ijaaramuu, hojii qindaa’a tahe gamtaan gageessuun barbaachisaa dha. Tokkummaa keenya humna keenya isa sibiilaa caalu. Amma danda’ame WBOf daandii mijjeessuun ni caala. WBO malee bilisummaan Uummata Oromoo ni mirkanaa jennee yaaduun dogogora hammaa keessa nu galchuu danda’a.
Shirri OPDOn biyya diiguuf qopheeffate Via Dabessa Gemelal, Muddee 29, 2018 Ilmoo dabaafi abaarsaa kan…